China Factory Ihowuliseyili yokuSebenza ePhakamileyo yokuCoca umoya mveliso kunye nabenzi | Chuangqi
Isithuthi esisebenza ngemoto esisebenza ngokuzenzekelayo ...
Abicah irabha ithumbu, umoya umoya irabha ithumbu
China Manufacturer Ixabiso Auto Injini Car Oli lokucoca ulwelo ...
Umatshini wokucoca ulwelo womoya oSebenzayo oPhezulu oPhezulu
1. Ikhusela i-injini yakho ngokumisa i-98% yamasuntswana asongela i-injini
2.Ukukhuselwa komoya wokungena kwinjineli engacocwanga enetywina ekumgangatho ophezulu
I-3.Ingine izixhobo ezikumgangatho ophezulu wokusebenza ngokungenasiphako kuyo yonke inkonzo yobomi yecebo lokucoca ulwelo
I-4.Yenzelwe ukonyusa amandla ehashe kunye nempendulo yokubamba
Ukusebenza ngokugqwesileyo kwimeko yokubaleka enothuli
into Isihluzi somoya
HAYI HAYI. OEM
Isiqinisekiso I-ISO9001 2015
Izinto eziphathekayo Iphepha lokucoca ulwelo elihlala ixesha elide / uxinizelelo oluphezulu lwengubo ephothiweyo
MOQ 50 isiqwenga
Ixesha lokuzisa Kwiintsuku ezili-15 emva kokufumana idiphozithi.
Intengiso , United States, Middle East, Russia, Brazil, Italy, Egypt, Pakistan, Pakistan, mpuma Asia, njl.
Kutheni utshintsha isihluzo somoya?
Ukukhuselwa kweinjini kunye nokusebenza okuphezulu.
Umsizi, umba womba, umungu kunye nokunye okuninzi kunokungena kwi-injini yakho xa uqhuba.
Ezi zinto zingcolileyo zinokukhokelela ekufumaneni amanqaku e-piston kwigumbi lokutsha kwaye ngenxa yoko ukunxiba ngaphambi kwexesha kwiinjini yakho. Izinto ze-elektroniki ezinje ngee-sensors eziphakathi kokungena kunye negumbi lokutsha zinokonakaliswa okanye zitshatyalaliswe kukusilela kokucoca ulwelo.
Iifilitha zomoya zikhusela kobo bungozi bokwenza utshintsho oluqhelekileyo lokucoca ulwelo kunyanzelekile.
Ukusebenza kweenjini ngokungaguquguqukiyo. Ukunxiba kancinci.
Iifilitha zomoya ezivela eConqi ngokufanelekileyo nangokuthembekileyo kwiscreen sokungenisa umoya kunye nokuqinisekisa kungekuphela komxube olungileyo womoya kunye nepetroli kwigumbi lokutsha kodwa kunye nokusebenza ngokungaguquguqukiyo okuphezulu kwenjini yakho.
Enkosi kwimveliso ekumgangatho ophezulu kumanqanaba asemgangathweni e-OEM, izihluzi zomoya ezivela eConqi zizinzile, ngakumbi zomelele kwaye zinokuphatha imithwalo yemithambo engathethekiyo ngaphandle kwemicimbi- yokusebenza ngokuhluza ngokupheleleyo kulo lonke ixesha lokugcinwa.
■ intambo yelaphu engenacici
■ Unokucoca ngokufanelekileyo ukuvumba komsi, umungu, uthuli, igesi eyingozi kunye nokunye
■ Zilahle iimveliso ezibhityileyo ezikumgangatho ophantsi.
■ Sebenzisa imathiriyeli eyaneleyo yokwenza imveliso eshinyeneyo
Yidlale ngokukhuselekileyo! Ukukhusela ngokupheleleyo injini yakho.
Ukusebenza okusebenzayo kulo lonke ixesha lokugcina
Ukukhuselwa okuphezulu kwenjini, imitha yemitha yomoya kunye nezinye izinto ezibuthathaka
Ubuninzi bokusebenza kokuzahlula ubumdaka kunye nokumelana okuphantsi
Ixesha elide 100% itywina
Esi sisihluzo kufanelekile ukuba usithenge.
Ukongeza, sinokubonelela ngeyona mveliso ithandwayo yokupakisha kunye neyona mveliso ilungileyo yokuprinta (eJapan, Thailand)
Ukuze iimveliso zakho zitshayele intengiso yakho
1, sinako ngokusesikweni lokucoca ulwelo ngokweemfuno zakho.
2, Samkela iiodolo ezincinci.
3, singathengisa iimveliso ezigqityiweyo.
4, singakwazi ukubonelela ngezinto ezingafunekiyo.
Egqithileyo IPregio PU Isihluzi soMoya iCartridge OK72C-23-603
Okulandelayo: izahlulo ezizimeleyo zokucoca ulwelo fuel 030 115 561AB
Icebo lokucoca ulwelo lweMoto iToyota
Icebo lokucoca ulwelo Air Manufactur Machin
Icebo lokucoca ulwelo ngokuzenzekelayo
Auto injini izahlulo air 17801-0C020 C23107 ...
Ukuthengiswa komgangatho ophezulu wokucoca umoya o ...
Auto Cabin Air lokucoca ulwelo MME61701 MZ341012EX MN185 ...